Windows 10 Kusika Kwekugadzira Venzi - VipCasting.cz
Musi wechipiri 17. Gumiguru, Microsoft inoronga kutanga vashandisi zvishoma nezvishoma kuisa imwe yeWindows 10 yokushandura hurongwa hwehurongwa. Izvo zvinodanwa Fall Fall Creators Update (1709 version) inounza kuchinja kwakasiyana-siyana kwehurongwa pachayo.
Kuvandudza Kuenda Kwekusika Vadzidzi vanofanira kukupa kana kuisa iyo system iwe pachako. Kana zvisati zvaitika uye iwe usingadi kumirira, iwe unogona kukwanisa kuzvitsvakira kubva paIndaneti yeWebhuti - Microsoft ichaisunungura.
Iyo nguva inokubvumira kudzoka nenguva kuti uone zvawakashanda uye uye kana iri 2 kana 2. Ingodzokera kumashure emafaira ako, mapurogiramu, uye masayiti sekuti iwe hauna kumbovakasiya.
Finda mafaira ako mugore asi usingashandisi nzvimbo yako yekuchengetedza nzvimbo neOneDrive Files paDemo. Iwe unogona kuona zvose mafaira muFaira Explorer uye uvawanire pane zvinodiwa kana zvichidiwa.
Vashandi ve Movie Movie vachava nehanya neR Remix. Sarudza mapikicha nemavhidhiyo, kuwedzera mimhanzi, kuchinja, uye kunyange 3D migumisiro. Dzvanya bhatani uye voilà - une bhava itsva yevhidhiyo yako.
Ona zvinhu 3D munyika yako uye tora snapshot uchishandisa kamukati yekombiyuta yako.